Zororo / kurudziro - Geofumadas
Zororo / kurudziro
Pfungwa nemafungiro emunyori we geofumadas
Esri inoburitsa Bhuku Rekuita Rebasa rakapusa naMartin O'Malley
Esri akazivisa kuburitswa kweSmartter Government Workbook: Iyo 14-Vhiki Implementation Nhungamiro yeKutonga Kwemhedzisiro neyaimbova Maryland Gavhuna Martin O'Malley. Iri bhuku rinodzikisira zvidzidzo kubva kubhuku rake rapfuura, Hurumende Yakapenga: Maitiro Ekutonga Mhedzisiro muRuzivo Zera, uye muchidimbu inopa chirongwa chinofambidzana, chiri nyore-kutevera ...
ArcGIS-ESRI, Blog, Cartography, Zororo / kurudziro
Siya kuVenezuela munguva yekusviba
Ini ndinofunga vamwe vanoziva mamiriro ezvinhu muVenezuela, ndinodaro vamwe nekuti ndinoziva kuti Venezuela haisi iyo nzvimbo yepasirese, uye nekudaro kune vanhu vasingatozive iko. Vazhinji veavo vanondiverengera, vanonzwa uye vanotambura nemamiriro ezvinhu kubva kunze, vashoma vanotenda kuti vanoziva zviri kuitika, vanoita mitongo ...
Zororo / kurudziro, Politics uye Democracy
Kusiya Venezuela kuenda kuColombia - My Odyssey
Wakambonzwa here muviri usina mweya? Ndazvinzwa nguva pfupi yapfuura. Hunhu hunova hunhu husina simba hwaunongonzwa kuti huri kurarama nekuti hunofema. Ndinoziva kuti zvinofanirwa kunge zvakaoma kunzwisisa, uye zvakanyanya kunyangwe kana ndisati ndajaira kuzvirova dundundu semunhu akanaka, azere nerunyararo pamweya ...
13 Nhoroondo Mapikicha Evanhu Bhizinesi rezveMabhizimusi
Gore ra2015 rapfuura. Kupemberera, tinokuunzira mifananidzo mishoma yenhoroondo inotiyeuchidza kuti nguva haina kupfuura yekunakidzwa kwayo. Iyo LZ 129 Hindenburg, ndege yeZeppelin-yerudzi, yakaparadzwa nemoto payakamhara muNew Jersey muna Chivabvu 6, 1937. Tsaona yakakonzera kufa kwe36 ...
Engineering, Innovations, Zororo / kurudziro
6 zvinhu zvekutarisa muKubatanidzwa Registry - Cadastre
Kuita iyo Cadastre uye iyo Real Estate Rejista ishande pamwe parizvino ndeimwe yematambudziko anonyanya kufadza mumaitiro eazvino ehurongwa hwekodzero dzepfuma. Dambudziko rinowanzo fanika, kutopfuura mamiriro edu echiSpanish. Kune rimwe divi, fungidziro ye ...
Cadastre, My geofumadas, Zororo / kurudziro
Kufuridzirwa - Maitiro mune zveGIS matekinoroji - ESRI UC zuva rekutanga
2005 yaive kekutanga nguva yandakaenda kuUSRI Musangano weVashandisi, nguva dzose munzvimbo imwechete: Iyo San Diego Convention Center, iine mabhendi mahombe akarembera kubva pamaberere egirazi rakareba rakajeka regirazi. Bumping muArabhu ane ndebvu dzinonamira uye majasi machena, brunettes anobva kuAfrica kondinendi achinyemwerera ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Zororo / kurudziro
Infrastructure Conference 2014: Inspiration nokuti vaitaura chiHispanic
Svondo rapfuura Musangano weZvivakwa wegore ra2014 wakaitwa, zvakare muLondon, mune mubairo unozivikanwa seKufuridzirwa wakaitirwawo Chiitiko ichi chakange chakarongeka zvakanyanya kupfuura dzimwe nguva, iyo nharembozha yavakagadzira yeIOS uye Android yaive yakanakisa; pamwe nekuvandudzwa, ...
Bentley Systems Ini-muenzaniso
Microstation-Bentley, Zororo / kurudziro
UPSOCL - Saiti yekufemerwa
Yayo interface iri nyore, isina mabara epadivi, pasina kushambadzira, ingori fomu yekutsvaga uye menyu ingangoita isingaonekwe ine zvikamu zvishanu. Ino ndiyo saiti inotaura chiSpanish UPSOCL, yakatsaurirwa kugovana zvinhu zvakakoshesa pasirese. Zvinhu zvinokurudzira, zvinhu zvinokatyamadza, uye zvinhu zvinofanirwa kuonekwa. Its…
Internet uye Blogs, Zororo / kurudziro
5 Zvido zvekuchengeteka kwekuongorora zvinhu
Zvaive zvakaoma kugonesa vakuru vebasa panguva iyoyo; kuti midziyo yaizotengwa yaifanirwa kuve neinishuwarenzi pakurwisa kuba, kukuvara uye tsaona. Zvinonzwisisika pakutanga, nemibvunzo yakadai seiyi: Kana iyo michina ikazopihwa kumasipala, wadii zvirinani kuti vabhadhare inishuwarenzi? Pamusoro pokuba? Izvi hazvikupe mikana here ...
GPS / Equipment, Zororo / kurudziro, topografia
Inenge tsamba yekupedzisira kune vandinoshanda navo ... ini handina kusiya
Nhasi chete mazuva gumi apfuura, sezvamunoziva, ndakamira kusaina mapepa ane chekuita nechirongwa chakandichengeta ndakabatikana uye ndichifemerwa kwemakore manomwe. Chokwadi vachange vakamirira tsananguro, nekuti vanhu vashoma vepedyo chete ndivo vaiziva nezvavo mazuva mashoma apfuura, kunyangwe zvainge zvakarongwa kubva pazuva randakasarudza ...
Inguva iyo shuviro yekuchinja mamiriro inotanga kukwenya ... Ini ndinogovana imwe yeakanakisa mafaro andakaona kubva kune mumwe wevapi vangu vadzidzisi. Sezvo ini ndanga ndisingade kukusanganisa iwe mune yakajairika uye yemasangano ekuonekana email (iwe uri chimwe chinhu) ndinokuudza izvozvo: Kuva 09:30 muna Chikumi 28, ...
Ndingashandisa Google Earth mifananidzo ye cadastre?
Kuve nenguva yakanaka neshamwari yechiDutch nhasi, ini ndinoratidzira kumwe kufanana pakati peiyo kenza inotungamira mune yekiriniki psychology uye kudanana kweGoogle Earth ine zvisirizvo zvinopera: Stage 1: Scare. Nyanzvi inoenda kumunda ichipindura chikumbiro chekuyera kubva kumuridzi ...
Cadastre, Google pasi / mamapu, Zororo / kurudziro
VBookz, yakanakisisa Audio muverengi kuti iPad / iPhone / iPod
Kuverenga zvinonzwika kunyorera kuri pasina shanduko nzira yatinofarira mabhuku. Kunyanya, ini ndagara ndichifarira kunakidzwa kwekumisikidza uye kumahombekombe manotsi nebhuku chairo, kumira uye kuverenga zvishoma nezvishoma kuti upise yakanaka prose. Asi hazvina kumboitika kwandiri kuti kuenda parwendo kunogona ...
4 dzinokosha nguva munhoroondo yeGeofumadas
- Tinofanirwa kuve nebhurogu ... Akadaro mukuru wangu (HM), nemaziso ake asina kubatana nenyika ino. Ndakanzwa urombo nekusaziva izwi iro murume ane makore makumi manomwe nematatu akange ataura chisati chanyunyuta changu pamusoro pekuti nei Indaneti yakabviswa kumatunhu aive achichengetedza cadastral. Zvakawanda kupfuura kuzvitaura na ...
My geofumadas, Zororo / kurudziro
Dzokororwazve kubva kuhusiku hwangu hwega kuGuatemala, izvozvi izvo zvandiri kuda kuenda ikoko ndinokusiyira chimwe chinhu kuti ufare. Ini ndoziva, haina kuzadza obsession netekinoroji ... asi iripo. Aive musikana anotapira ane maziso matema uye bvudzi-refu rakatwasuka bvudzi, mumwe wehama dzakaropafadzwa dzevashandi vechikoro chebhodhingi ...
Iko kusanganisirwa kwenzvimbo yemagariro muhunyanzvi hwekudzidzisa maitiro
Vhiki rino ndanga ndichitaura nemumwe wevandinoshanda navo, uye isu tanga tichiita imwe nhoroondo nezvevhudzi rakachena iro makore atitora mukuita kwekuvandudza - yangu yakawanda kupfuura iyo inotsigira mhanza yake. Ini ndakatsanangura mashandisiro akaita shanduko yezvangu zvinondivhiringidza zvakandiita ini kuti ndichinje kubva kune yehunyanzvi munda kuenda kuinjiniya uyezve ndakananga ...
Kudzidzisa CAD / GIS, Zororo / kurudziro
Nzira yekubatanidza neIndaneti munzvimbo dziri kure
Ini ndaigara ndichinetseka kuti ndaizoitei kana ndaifanira kutamira kuguta diki, uko mukana wekubatana kwatinonakidzwa muguta unogumira. Zvizhinji izvozvi kuti edu manias ekudyidzana kwakauya neInternet anotiita kuti tizive maemail nyowani, nhau pamasocial network ...
Zororo / kurudziro, famba
Makore makumi matatu nemaviri gare gare, batanidza waya, kuvhara madhiri
Rwendo urwu rwekuzorora kwezhizha rwave rwunopfuura zvinopfuura kungozorodza kwepfungwa. Kwete kwandiri chete, zvakave zvevamwe vese vemhuri yangu vaindiperekedza. Dzimwe nguva fananidzo inosunganidzwa neshinda inoita kunge yechokwadi zvekuti zvinotora nguva yekufungisisa. Kupisa kwezhizha ...
peji 1 peji 2 peji 3 ... peji 7 peji Next